Sina Fiarovana ny tontolo iainana any ivelany haingon-trano mora fametrahana plastika WPC lalantsara mpanamboatra sy mpamatsy | Lihua
Fiarovana ny tontolo iainana ivelany haingon-trano mora fametrahana plastika WPC tànana tànana
Fananana entana:Lalantsara WPC
Loko:Kafe, sôkôla, Hazo, Hazo Mena, Cedar, mainty, Volondavenona, sns
2.2m, 2.9m, 3.6m na namboarina
Valan-javaboary, zaridaina, tetezana an-tendrombohitra
Malama, borosy, embossing mahery
Volondavenona, kafe, sôkôla, ceder, sns
●Lalantsara WPC dia be mpampiasa amin'ny tetezana valan-javaboary sy tetezana eny an-tendrombohitra
hiarovana ny filaminan'ny olona. Manana fomba maromaro amin'nyLalantsara WPCs hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samihafa. Ary koa ny firafitry ny voa voajanahary sy ny fikasihana, izany dia mety mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny tànana WPC dia manana endrika tsara tarehy kanto sy fikojakojana bibikely mora tohina ary henjana be. Sariaka amin'ny tontolo iainana, azo averina madiodio tanteraka ary tsy misy simika mampidi-doza hafa, mitahiry loharanon-ala. Mora ny mametraka & ambany ny vidin'ny asa. Tsy misy hosodoko, tsy misy lakaoly, ambany fikojakojana.
● Manana ny orinasanay manokana izahay, ny loko sy ny habeny dia azo ahodina amin'ny safidinao. Aza misalasala manontany anay.
Teo aloha: Fitaovana plastika WPC vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina WPC 130x10mm ivelan'ny rano
Manaraka: Fanoherana toetrandro any ivelany Wood Composite WPC Hollow Decking
Fametrahana sary ny lishenan'ny hazo fiambenana plastika Lishen
F1: Mandra-pahoviana no miasa ara-dalàna ny mould anao? Ahoana no hitazomana isan'andro? Inona no fahafaha-manao isaky ny maty?
F2: Inona ny fizotry ny famokarana ataonao?
F3: Mandra-pahoviana ny ora fanaterana ara-dalàna ny vokatrao?
F4: Manana habetsahan'ny kaomandy farafaharatsiny ve ianao? Raha eny dia inona ny habetsan'ny kaomandy farany ambany?
F5: Inona no fahafahanao manokana?
F6: Firy ny orinasanao? Inona ny sandan'ny vokatra isan-taona?
A: Lihua dia ilay ha Teknolojia avo lenta sy vaovao, izay misy velaran-tany 15000 metatra toradroa ao amin'ny faritra Indianina Ara-panjakana Langxi. Manana mpiasa mihoatra ny 80 izahay, izay samy manana traikefa miasa amin'ny faritra WPC.
F7: Inona no fitaovana fitsapana anananao?
A: Ny orinasanay dia manana tester fananana mekanika, mpandidy afo-ratting, tester Anti-slip, Weight, sns.
F8: Inona ny fizotran'ny kalitao?
A: Mandritra ny fanamboarana, ny QC anay dia hanamarina ny habeny, ny lokony, ny atiny, ny kalitaony, avy eo dia hahazo santionany izy ireo hanaovana fitsapana fananana mekanika. Hanao ihany koa ny QC aorian'ny fitsaboana hijerena raha misy olana tsy hita maso ao. .Rehefa manao ny fitsaboana aorian'ny fitsaboana izy ireo dia hojerena koa ny kalitaony.
F9: Inona ny vokatra azonao? Ahoana no nahatratrarana azy?
A: Ny vokatra azontsika dia mihoatra ny 98%, satria hofehezinay aloha ny kalitao, hatrany am-piandohan'ny fitaovana, izy ireo QC dia hifehy ny kalitao rehefa manamboatra, ary koa ny mpanao asa tanana dia hanamarina sy hanavao ny raikipohy foana.
F10: Mandra-pahoviana ny androm-piainan'ny vokatra WPC?
A: Eo amin'ny 25-30 taona eo ho eo ao anatin'ny toe-javatra mety.
F11: Inona ny fe-potoana andoavanao vola ekenao?
A: Fe-potoana fandoavam-bola dia T / T, Western Union sns.
F12: Raha ampitahaina amin'ny hazo, inona ny tombony azo amin'ny vokatra WPC?
A: 1er, vokatra WPC dia sariaka tanteraka amin'ny tontolo iainana, azo averina 100% izany.
Faha-2, ny vokatra WPC dia tsy tantera-drano, hamandoana, tsy hosoka ary tsy hamonoana.
Faha-3, ny vokatra WPC dia manana tanjaka avo, akanjo sy rovitra ambany, tsy mamontsina izy io, tsy misy fiovana ary tsy tapaka
WPC Handrails ho an'ny atitany tohatra
Super Embossed tantera-drano vita amin'ny plastika hazo WPC Holl ...
Etsy ivelany Fireproof Wood Composite WPC Hollow Dec ...
Fantsom-pifandraisana an-tokotany rano any ivelany WPC Dec ...
Fantsona plastika vita amin'ny hazo 130x10mm ivelan'ny rano ...
Rindrambaiko ara-tontolo iainana ivelan'ny trano Wood Composite ...
UV-fanoherana mora fametrahana hazo Composite ...
Fanesorana ivelany WPC, Rihana fametahana WPC, Fanesorana WPC ivelany, Fitaovana WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanapahan-tsokosoko WPC,